Indawo eyahlukileyo ehlathini, kufutshane neHaarlem & beach - I-Airbnb
Indawo eyahlukileyo ehlathini, kufutshane neHaarlem & beach
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguJitka
"Indlu engasemva yePontanus" intle phakathi ehlathini kumhlaba weDuinvliet. Igadi entle enoxolo embindini weRandstad ingasetyenziswa.
Kukho iibhayisekile eziyi-2 onokuzisebenzisa simahla. Kwimizuzu eyi-15 uphakathi eHaarlem ngebhayisekile kwaye unemizuzu eyi-20 yokuhamba ngebhayisekile uselunxwemeni. Ukongezelela, zininzi izinto onokuzenza xa uhamba ngeenyawo/ngebhayisekile kufutshane. Indawo efanelekileyo yokuphumla, isixeko kunye nendalo.
Indlu engasemva isandul 'ukulungiswa kwaye inamagumbi ayi-2: igumbi lokuhlala elinesofa, itafile yokutyela kunye negumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini etofotofo. Ukongezelela, kukho ikhitshi elincinci negumbi lokuhlambela (indlu yangasese/ishawa/isinki).
4.81 · Izimvo eziyi-88
I-Duinvliet estate yinxalenye yeZuid-Kennemerland National Park kwaye ichasene nesikhumbuzo sesizwe i-Elswout. I-Elswout sisikhumbuzo sesizwe, kodwa ikwayindawo yezityalo nezilwanyana ezininzi. Ibe yindawo epholileyo yabantu abafuna ukubalekela esixekweni okwethutyana. Ukuze uhambe ngeenyawo, ipikniki, iti ephakamileyo, okanye ukhenketho nomgcini wehlathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Jitka